Amaski Okuthusa Ushintsha Ubuso Bokuphepha Komshayabhuqe Nesibopho Somphakathi
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo Amaski Okuthusa Ushintsha Ubuso Bokuphepha Komshayabhuqe Nesibopho Somphakathi
Izindaba Zokuzijabulisa EzesabekayoMarketplace
by UTimothy Rawles Kwangathi 20, 2020
ebhalwe ngu UTimothy Rawles Kwangathi 20, 2020
Ukuphepha komphakathi kube yinto eseqhulwini uma kuza ekuthathweni kwesinqumo sokuthi ngabe izwe kufanele livule kabusha kabusha noma cha. Ngokukhethekile, izifihla-buso zobuso * ziyimpahla eshisayo, abadwebi abasebenza isikhathi esengeziwe ukwenza enye indlela ejabulisayo nenemibala ehlaza okwesibhakabhaka.
Njenganoma imuphi umkhuba wefashini, noma owodwa ophoqelekile, isitayela siyisithako esiyinhloko. Ngakho-ke saqhubeka nokuzingela nge-Etsy nangaphezulu ukuthola amanye amamaski amahle kunawo wonke esingawathola futhi kungadingeki ukuthi sithi sithole okuningi.
Yize amanye amamaski enziwe ngesitayela angavunyelwe ukusetshenziswa yizikhulu zezokwelapha, ukuwugqoka esidlangalaleni kukhombisa umuzwa wakho wokuzibophezela emphakathini kanye nokuthanda kwakho isiko le-pop. Bacishe bafana namateyi ekhonsathi uma kukhulunywa ngokuxhuma nabanye abalandeli.
Sithole lezi zibonelo zokumboza. Ezinye zithathwe kumabhayisikobho asabisayo, ezinye zilinganiselwe emcabangweni womuntu kuphela. Ezinye zazo ziyizifihla zobuso bendabuko, kanti ezinye zifana nezinsimbi ezinokumbozwa okuhlukahlukene.
Ngokwengeziwe, sihlangabezane nemiklamo eminingi ebiqhutshwa ngohlelo lokusebenza lomuntu siqu. Lezi zinkampani zifaka izithombe endwangwini. Abathengisi bese bebathengisa ngemakethe yabo yangasese. Sifake lokho kuphela ngoba abanye abantu bazokhokhela ukuze kube lula.
I-WellDoneGoods wenze ngezandla lezi Xenomorph Facehuggers ($ 30). Thola i-Ripley yakho (ayifakiwe i-Jonesy) bese ukhombisa umhlaba ukuthi awusalali ngokweqile.
Le abicah darling kusuka UMSEBENZIUkusuka Esihogweni ($ 60) ungeza esinye isici ekuhlukaneni nomphakathi.
TeekaBoom ku-Etsy unika uJason impilo ne- "Bloody Hockey Mask Reusable Dust Mask Bandana Headband Neck Gaiter."
Isikhumba, Idayi, iRivet, iBuckle
Ingabe lokhu kungenza ngibukeke njengombulali wedrako? I-EpicLeather ku-Etsy usiphikisile ngesifihla-buso sakhe esingama-RPG amaningi kune-CDC.
I-AggressiveFashion uhlonipha uHannibal uCannibal uqobo ngohlobo lokuvinjelwa kobuso bakhe.
Imfashini Aggressive ku-Etsy
UChucky uzokwenza unemithungo enale maski ephelele, ngomthungo. Futhi, inkampani efanayo ibize StudioClique ivula umnyango kuJack Torrance nge yabo shining inkokhiso.
Le mask evela UchronicTime kungenzeka futhi ubizwe nge- “SteamPumkin.” Kubiza kancane ($ 104.90) nokuningi kwemvunulo, kepha kuzokwenza ubuqili ngenkathi kunikezwa umphakathi ukwelashwa ngaphambi kwe-Halloween.
Isikhathi se-Uchronic ku-Etsy
Sithole lokhu kumboza ubuso okuhlukahlukene Ama-Amazon. Sicabange ukuthi iphelele kulabo abangakwazi ukunquma ukuthi ngubani isithonjana sabo se-horror abasithandayo.
Nalu olunye uphawu lomlando wesabekayo kusuka ku- I-GorejessLaboratory ku-Etsy. Iheksagoni ekhanyayo yenzelwe i-Overlook Hotel kuphela. Lokhu kungenye yalezo zinto ongazi "noma ongazazi."
Ikhaphethi Elikhanyayo by
* Kumele kuqashelwe ukuthi obuso obubhalwe kule ndatshana abukho ebangeni lezokwelapha. Imininingwane ngemaski yobuso evunywa yi-CDC ukuthi isetshenziswe ngumphakathi ingaba kutholwe LAPHA.
BUKA: I-trailer entsha ye-'Antebellum 'ehambisana noJanelle Monae
U-Issa Lopez uzobhala, aqondise 'uMama wethu Wezinyembezi' weBlumhouse